Ny lalàna | The Reward Foundation - Fitiavana, firaisana ary Internet
Ny fitiavana, ny firaisana ara-nofo, ny Internet ary ny lalàna dia afaka mifandray amin'ny fomba sarotra. Ny Valin'ny Fananana dia afaka manampy anao hahatakatra ny dikan'ny lalàna ho anao sy ny fianakavianao.
Any UK, ny olona manana sary mamoha ankizy (olona latsaky ny 18 taona) dia azo enjehina amin'ny fandikan-dalàna. Ao anatin'izany ny faran'ny seho iray, ny olon-dehibe voatosika hikaroka firaisana amin'ny ankizy, amin'ny alàlan'ny tanora manao sy mandefa 'selfie' mitanjaka na semi-miboridana amin'izay mety ho fitiavana, sy ny fananany sary toy izany.
Ny fifantohana dia ny toe-draharaha ara-dalàna any Angletera, saingy ny olana dia mitovy amin'ny firenena maro. Azafady, ampiasao ity tranonkala ity ho toy ny teboka fanombohana.
Ao amin'ity fizarana ity, ny Reward Foundation dia mandinika ireto olana manaraka ireto:
• Ny fitiavana, ny firaisana, ny Internet ary ny lalàna
• Tatitra momba ny fihaonambe momba ny vanim-potoana
• Vanim-potoanan'ny fanekena
• Inona ny faneken'ny lalàna?
• Fankatoavana sy zatovo
• Inona no fanekena amin'ny fampiharana?
• Hafatra Vetaveta
• Miforitra eo ambanin'ny lalànan'i Scotland
• Fandraisana an-tserasera amin'ny lalàn'i Angletera, Wales ary Irlandy Avaratra
• Iza no manao an'ilay hafatra?
• Ny fiakaran'ny heloka amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo
• Ny orinasa mamoafady